अन्तिम पत्र । – NepalayaNews.com
अन्तिम पत्र ।
२४ माघ २०७६, शुक्रबार ०७:३९
अमित समझना अनि मुटुभरी माया ।
जिन्दगी एउटा रंगमन्च हो जहाँ सत्य र असत्यको दोहोरी चलिरहन्छ यहि भन्थेउ नि तिमीले हो त्यही रङ्गमन्चको पात्र हामी पनि हौ जहाँ सत्य र असत्यको दोहोरी चलेन तर केही असमझदारीको कारण पात्रहरु अलग मात्रै भएका हौ । पात्रहरु अलग भएर के भयो र?? मुटुमा माया भएसी । पाउनु मात्रै माया होइन गुमाउनु पनि माया हो ।
निडर,शहासी, आत्मविश्वासी यस्तै शब्दको पर्यायवाची हौ तिमी । तिम्रो त्यो फरासिलो स्वभावको त म फ्यान नै हु । जिन्दगी बाच्नको लागि कति सङ्घर्ष गर्न पर्छ भन्ने कुरा कति मजाले सिकाएर गयौ तिमी । काठमाडौंको त्यो वातावरणको बारेमा मलाई कति छिटो अवगत गरायौ तिमीले ।
संसारका सारा मानिसहरु आ-आफ्नै जिवनका कलाकार हुन । तिमी हिट कलाकार हौ अनि म भर्खर सिक्दै गरेको एक पात्र । त्यो पात्र जसलाई निश्चल माया गर्न आउथ्यो अनि सिक्दै थिए जिन्दगी बाच्ने तरिकाहरु स्टारबाट तर हिट कलाकारले झिनो पात्रको वास्ता गरेन । भर्खर हिड्न सिक्दै गरेको बालकको हात छडेउ तिमीले । गर्वबाटै फ्याकेउ तिमीले मलाई ।
थाहा छ सृष्टि अचाल म सधै खाना खान्छु पहिले जस्तो चाउमिनमा छाक तार्दिन । तिम्रो त्यो खिचदी वाला आइडिया फलो गर्छु । तिम्रो यादमा बसमा सफर गर्छु । मलाई मन नपर्ने करेला अचाल साप्ताहिक रुपमा सेवन गर्छु । तिमी जस्तै आत्मविश्वासी अनि निडर बन्ने प्रयास गर्छु अचाल । तिमीले सिकाएका हरेक कुराको अनुसरण गर्छु । तर तिम्रा यादहरुले घरी घरी बाटो छेक्छन । बाहिर राम्रो देखिए पनि भित्र यति ध्वस्त भएको छु कि सृष्टि उठ्न अझै दशक लाग्छ होला । तिम्रो यादहरु मेरो शरिरको हरेक अङ्गमा छन । मेरो जिवनको हरेक पातोमा तिमी मिसिएकी छौ । यादहरु शिलालेख जस्तै हुदा रहेछन जति पुरानो हुँदै गयो त्यति महत्त्व बढदै जाने ।
आज तिम्रो लागि यो पत्र लेख्दै गर्दा मेरा औलाहरुले भ्याउ पाइरहेका छैनन । कुन शब्द लेखु कहाँ लेखु भन्ने कुरा पत्तो पाइरहेका छैनन ।
आखिर के कारण हाम्रो सम्बन्धको द इन्ड भयो भन्ने कुरामा अझै पनि छक्क परिरहेको छु । खास्सै ठूलो गल्ती गरे जस्तो लाग्दैन मलाई । गाउँ गएको थिए दिदिको बिहेमा । गाउँमा नेटवर्कको समस्या हुन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा थियो कन्ट्याक्ट्मा आउन सकिन अनि तानसेन आए दाइको बिहेको चटारो थियो समय दिन सकिन यति कुरामा तिमी रुष्ट भयौ । तिमीलाई रिसेप्सन पार्टिमा आउने निम्तो एक महिना अघि नै दिएको थिए तिमी आउने पक्का पक्की भैसकेको थियो तर अन्तिममा तिमीले मलाई नै लत्यायौ । आवेगमा मैले तिमीलाई जलाउने हेतुले फेसबुकमा बहिनीको फोटो अप्लोड गरे । फोटोमा अनेक कमेन्ट आए अनि तिमीले मलाई ब्लक गर्‍यौ । तिमीले समस्याको जड सम्म जाने इच्या जाहेर गरेनौ । हो मैले गल्ती गरेको हो तर त्यति ठूलो गल्ती गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई कि यति ठूलो सजाय दिदैछौ । संसारमा त्यो मान्छे महान हुन्छ जसले गल्तीहरु माफ गरिदिन्छ । तिमीले त मलाई जन्मकैदको सजाय दिएर गएका छौ । सजाय भोग्न म तयार छु ।
अब जे हुने भैसक्यो बितेका समयलाई फर्काउन सकिन्न तर यो सास रहुन्जेल सम्म तिमीलाई याद गरिरहने छु । तिमी आफै जान्ने छौ बुझ्नेछौ मले तिमीलाई सिकाइराख्न पर्दैन तर एकदुईओटा कुराको ख्याल गर्नु । फरासिलो हुनुपर्छ सृष्टि तर त्यति धेरै फरासिलो पनि नहुनु कि तपाइको त्यो फरासिलो पनको फाईदा उठाओस । समाचार वाचन गर्दा कहिले नर्भस नहुनु । पत्रकारिता गर्दा आफ्नो ज्यानको पनि ख्याल गर्नु । राजनितीमा त्यति धेरै नहोमिनु । अब मेरो जिवनमा फर्केर आउदैनौ थाहा छ तर कमसेकम मेरो घाउमा नुन हाल्ने काम पनि नगर्नु ।
मुटुमा छुरा रोपि बिस्मातको खुसी दिई बालुवाको घर ठडाएर गयौ तिमी !
भन्दै थिए बालुवाको घर बलियो हुदैन भनेर तर महलको सपना देखाएर गयौ तिमी !!
उहीँ तिम्रो फकिर कैदी
पवन खाम्चा मगर
लोक गायक प्रेमराजा महत दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०७:३९
टिकटक र विच्याट प्रतिवन्ध गर्ने ट्रम्पको आदेश महत्वपूर्ण होइन– विज्ञ २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०७:३९
हङकङको स्वतन्त्रता खोसिनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अमेरिकाले लाममाथि लगायो प्रतिबन्ध २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०७:३९